सेयर बजारमा १ अर्ब माथिको कारोबार हुँदा कमाउने र गुमाउनेमा कुन–कुन कम्पनी परे ? – Arthatantra.com
सेयर बजारमा १ अर्ब माथिको कारोबार हुँदा कमाउने र गुमाउनेमा कुन–कुन कम्पनी परे ?
काठमाडौ । बुधबार सेयर बजार २.४९ अंकले बढेर १६६२.७४ अंकमा पुगेको छ । बीमा, जलविद्युत्, उत्पादनमूलक र अन्य समूहले झारेको बजारलाई बैंकिङ, होटल, विकास बैंक र फाइनान्स समूहले उचालेका छन् ।
बीमा, उत्पादनमूलक, जलविद्युत् र अन्य क्रमशः ४९.५२, ३.३७, २.६३ र ०.५८ अंकले घटेका छन् भने बैंकिङ, होटल, विकास बैंक र फाइनान्स क्रमशः १.५६, १४.०३, १२.०५ र ३१.७७ अंकले बढेका छन् ।
कारोबार रकम मंगलबारको तुलनामा सामान्य घटेको छ । दिनभरिमा १५७ वटा कम्पनीको २१ लाख ७९ हजार ६५१ कित्ता सेयर आठ हजार आठ सय १९ पटक खरिदविक्री हुँदा एक अर्ब पाँच करोड २० लाख रुपैंयाभन्दा बढिको कारोबार भएको छ ।
नेपाल ग्रामीण विकास बैंकको सबैभन्दा धेरै आठ करोड ५५ लाखको कारोबार भएको छ भने मुक्तिनाथ विकास बैंकको पाँच करोड माथिको कारोबार भएको छ । वरियन्टल होटल्स, नेपाल लाइफ र फरवार्ड कम्युनिटी माइक्रोफाइनान्सको तीन करोडमाथिको कारोबार हुँदा रुरल माइक्रोफाइनान्स, प्राइम लाइफ, एभरेष्ट बैंक, हिमालयन डिस्टीलरी, छिमेक लघुवित्त लगायतको दुई करोडमाथिको कारोबार भएको छ ।
नेशनल माइक्रोफाइनान्स, कुबेर मर्चेन्ट फाइनान्स, मिर्मिरे माइक्रोफाइनान्स र वल्र्ड मर्चेन्ट बैंकिङका सेयरधनीले क्रमशः ९.९७, ९.९१, ९.८३ र ९.४२ प्रतिशतका दरले कमाएका छन् भने नागरिक लगानी कोष र स्वरोजगार लघुवित्तका सेयरधनीले ८ प्रतिशत तथा बरुण हाइड्रो र नेपाल ग्रामीण विकास बैंकका सेयरधनीले ५ प्रतिशतभन्दा बढीले कमाएका छन् । काबेली विकास बैंक, फरवार्ड कम्युनिटी माइक्रोफाइनान्स लगायतका सेयरधनीले पनि कमाएका छन् ।
युनाइटेड मोदी हाइड्रोका सेयरधनीले सबैभन्दा धेरै ५.२७ प्रतिशतका दरले गुमाएका छन् । एनबि इन्स्योरेन्स, ङादी ग्रुप पावर, सेन्ट्रल फाइनान्स, जेविल्स फाइनान्स, महिला सहयात्रा माइक्रोफाइनान्स, कञ्चन डेभलपमेन्ट बैंक राष्ट्रिय बीमा कम्पनी, राष्ट्रिय बीमा कम्पनी प्रोमोटर, कालिका माइक्रोक्रेडिट लगायतका सेयरधनीले पनि गुमाएका छन् ।
६ अंकले नेप्से घट्दा स्ट्याडर्ड चार्टड बैंक लगायतको कारोबार यस्तो काठमाडौ । साताको चौथो दिन बुधबार सेयर बजार परिसूचक नेप्से ६.२२ अंकले घटेर १६६१.७२ अंकमा […]
उत्तारचढाबकाबीच सेयर बजार परिसूचक नेप्से र कारोबार दुवै घट्यो काठमाडौ । सोमबार सेयर बजारमा परिसूचक नेप्से तथा कारोबार रकम दुवैमा गिरावट आएको छ । […]
सेयर बजारबाट मंगलबार करोडौं कमाउनेमा को को परे ? ३४ अंकले बढ्यो नेप्से मंगलबार सेयर बजार परिसूचक नेप्से ३४.७२ अंकले बढेर १६३७.३७ विन्दुमा आइपुगेको छ । नेप्से […]
सेयरमा ७ अंकमाथिको वृद्धि हुँदा कमाउनेमा को–को परे ? काठमाडौ । साताको तेस्रो दिन मंगलबार सेयर बजार बढेको छ । नेप्से परिसूचक ७.५६ अंकले बढेर […]